Abantu bayaNyuka ngexesha loBhubhane ngoBuchule boBuchule
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Abantu bayaNyuka ngexesha loBhubhane ngoBuchule boBuchule
IBhodi yezoKhenketho yaseAfrika • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukwaphula iindaba zase-US • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • komzila Ngoku • Iindaba ezahlukeneyo
UBill Gates unomyalezo kwihlabathi.
Idatha entsha ityhila ukuba umhlaba unyukile ukuthintela iimeko ezimbi kakhulu ukuba zingenzeki; iindawo zokukhangela indawo kufuneka utyalomali lwexesha elide ukuqinisekisa ukubuyiswa okulingeneyo kunye nenkqubela eqhubekayo kwiinjongo zehlabathi, ezaziwa ngokuba ziinjongo zophuhliso oluzinzileyo lweUN.
Isiseko seBill & Melinda Gates namhlanje siphehlelele iNgxelo yabaGcini bonyaka yesihlanu, inedatha ehlaziyiweyo yehlabathi ebonisa ifuthe elibi lo bhubhane kwinkqubela phambili kwiinjongo zoPhuhliso oluZinzileyo lweZizwe eziManyeneyo (iiNjongo zeHlabathi).
Ingxelo yalo nyaka, ebhalwe nguBill Gates noMelinda French Gates, abangusihlalo beBill & Melinda Gates Foundation, ibonisa ukuba ukungangqinelani okubangelwe yi-COVID-19 kusekho, kwaye abo bathe babethwa kakhulu ngulo bhubhane iya kuba icotha ukubuyela kwimeko yesiqhelo.
Ngenxa ye-COVID-19, abantu abongezelelekileyo abangama-31 ezigidi batyhalelwa kubuhlwempu obugqithisileyo ngo-2020 xa kuthelekiswa nonyaka ka-2019. -uqoqosho lwengeniso kulindeleke ukuba lwenze njalo.
Ngethamsanqa, phakathi kolu hlaselo, umhlaba wenyuka ukuze uthintele ezona meko zinzima. KwiNgxelo yabaGcini bonyaka ophelileyo, iZiko leMetri yezeMpilo kunye noVavanyo (IHME) liqikelele ukwehla kwamanqaku eepesenti ezili-14 kugonyo lwehlabathi lokugonya-isusa ngokufanelekileyo iminyaka engama-25 yenkqubela kwiiveki ezingama-25. Uhlalutyo olutsha oluvela kwi-IHME lubonisa ukuba ukwehla, ngelixa kungamkelekanga, bekusiqingatha nje sento ebilindelwe.
Kule ngxelo, oosihlalo-babini baqaqambisa "ubuchule obutsha" obabunokwenzeka kuphela ngenxa yentsebenziswano, ukuzibophelela kunye notyalo-mali kumashumi eminyaka. Bayavuma ukuba ukuthintela ezona meko zibi kuyancomeka, kodwa bayabona ukuba akonelanga. Ukuqinisekisa ukubuyiswa okulingene ngokwenyani kulo bhubhani, bafuna utyalomali lwexesha elide kwezempilo nakwezoqoqosho-njengalezo zikhokelele kuphuhliso olukhawulezayo lwesitofu se-COVID-19 -ukuqhubela phambili iinzame zokubuyisa kunye nokubuyisela umhlaba kumkhondo ukuhlangabezana neenjongo zehlabathi.
"[Unyaka ophelileyo] uqinise inkolelo yethu yokuba inkqubela phambili inokwenzeka kodwa ayinakuphepheka," babhale oosihlalo. "Ukuba singanabela kweyona nto intle esiyibonileyo kwezi nyanga zili-18 zidlulileyo, singasusa ubhubhane emva kwethu kwaye sikhawulezise inkqubela phambili ekusombululeni imiba esisiseko enjengempilo, indlala kunye notshintsho lwemozulu."
Le ngxelo ibalaselisa impembelelo yezoqoqosho engalinganiyo ethe yabanjwa ngulo bhubhane kwabasetyhini kwihlabathi liphela. Kumazwe anengeniso ephezulu kunye nephantsi ngokufanayo, abasetyhini baye babethwa nzima kunamadoda kukudodobala koqoqosho okwabangelwa ngulo bhubhane.
"Abasetyhini bajongana nezithintelo kulwakhiwo lwehlabathi, zibashiya besesichengeni sokuchaphazeleka kwesi sifo," utshilo uMelinda French Gates. “Ngokutyala imali kwabasetyhini ngoku nokusombulula ezi ngxaki, oorhulumente banokukhuthaza ukubuyela kwimeko yesiqhelo ngokuqinisa uqoqosho lwabo ngokuchasene neengxaki ezizayo. Ayisiyonto elungileyo ukuyenza-kodwa ngumgaqo-nkqubo olumkileyo oya kunceda wonke umntu. ”
Ingxelo ikwabonisa indlela ekuthiwa "ngummangaliso" wezitofu ze-COVID-19 yayisisiphumo samashumi eminyaka otyalo-mali, imigaqo-nkqubo, kunye nentsebenziswano eyasungula iziseko zophuhliso, italente, kunye neenkqubo zendalo eziyimfuneko ukuze zisetyenziswe ngokukhawuleza. Nangona kunjalo, iinkqubo ezivumela uphuhliso olungazange lubonwe ngaphambili kunye nokusasazwa kwesitofu sokugonya se-COVID-19 sikhona ikakhulu kumazwe afumileyo, kwaye ngenxa yoko, umhlaba awuzange uxhamle ngokulinganayo.
"Ukunqongophala kokufikelela ngokulinganayo kwizitofu ze-COVID-19 yintlekele yezempilo yoluntu," utshilo uBill Gates. “Sijongene nomngcipheko wokwenene wokuba kwixa elizayo, amazwe atyebileyo noluntu luza kuqala ukunyanga i-COVID-19 njengesinye isifo sendlala. Asinakubushiya ngasemva ubhubhane emva kokuba wonke umntu, nokuba uhlala phi na, abe sele ekwazi ukufikelela kwizitofu zokugonya. ”
Ngaphezulu kwe-80% yazo zonke izitofu zokugonya ze-COVID-19 ziye zanikezelwa kumazwe anengeniso ephezulu kunye nephakathi ukuya kuthi ga ngoku, ezinye zikhusele kabini ukuya kathathu inani elifunekayo ukuze zikwazi ukukhusela izikhuthazi; ngaphantsi kwe-1% yeedosi zenziwe kumazwe anengeniso ephantsi. Ngapha koko, ukufikelela kwisitofu sokugonya se-COVID-19 kudityaniswe kakhulu neendawo apho kukho i-R & D yokugonya kunye namandla okwenza imveliso. Nangona iAfrika ilikhaya kwi-17% yabemi behlabathi, umzekelo, ine-1% engaphantsi kwe-XNUMX% yamandla okuvelisa isitofu sehlabathi.
Ekugqibeleni, ingxelo ifuna umhlaba ukuba utyale imali kwi-R & D, kwiziseko zophuhliso, kunye nezinto ezintsha kwiindawo ezikufutshane nabantu abaza kuzuza.
"Kufuneka sityale imali kumaqabane asekhaya ukomeleza amandla abaphandi kunye nabavelisi kumazwe anengeniso ephantsi ukwenza izitofu namayeza abawadingayo," utshilo umphathi weGates Foundation uMark Suzman. “Ekuphela kwendlela esinokusombulula ngayo eyona miceli mngeni mikhulu yezempilo kukuzoba izinto ezintsha nesiphiwo sabantu kwihlabathi liphela.
Ngeendlela ezininzi, ubhubhane uvavanye ithemba lethu. Kodwa ayikonakalisi.
Phantsi kwezona meko zinzima onokucinga ngazo, sibone izinto ezintsha ezimangalisayo.
Sibonile ukuba sinokuthi sikhawuleze kangakanani ukutshintsha indlela esiziphethe ngayo, ngokwabantu nanjengentlalo, xa iimeko zifuna njalo.
Kwaye namhlanje, sinokuthi sixele ukuba abantu kwiindawo zonke zehlabathi bebesenyuka ukuya kukhusela inkqubela phambili esele siyenzile kumashumi eminyaka-xa kufikwa kwi-SDGs, ubuncinci, ifuthe lobhubhane we-COVID-19 oqhubekayo ibinokuba mandundu ngakumbi.
Ibingunyaka oqinise inkolelo yethu yokuba inkqubela phambili inokwenzeka kodwa ayinakuphepheka. Umzamo esiwubekayo kwimicimbi mkhulu kakhulu. Kwaye, njengabantu abangakhathaliyo, siyakholelwa ukuba singaqala ukufunda kwimpumelelo kunye nokusilela kobhubhane ukuza kuthi ga ngoku. Ukuba sinokwanda kweyona nto intle siyibonileyo kwezi nyanga zidlulileyo ze-18, sinokuthi ekugqibeleni sibeke ubhubhane ngasemva kwethu kwaye siphinde sikhawulezise inkqubela phambili ekujonganeni nemicimbi esisiseko efana nempilo, indlala, kunye notshintsho lwemozulu.
Zeziphi ezinye izisombululo ezinceda kugqatso lokuphelisa ubhubhane? Bukela iBill Gates kunye nooGcini-gadi abathathu beqaqambisa izixhobo ezisetyenziselwa ukulwa i-COVID.
Idatha ibalisa ibali elothusayo
Kunyaka ophelileyo, bekungenakwenzeka ukuba kungakhathalelwa ukwahluka okupheleleyo kungekuphela ekubeni ngubani ogulayo kwaye ngubani oswelekileyo-kodwa nakwabo kwakufuneka baye emsebenzini, ngubani owayenokusebenza ekhaya, kwaye ngubani owaphelelwa ngumsebenzi ngokupheleleyo. Ukungalingani kwezempilo kudala njengeenkqubo zempilo ngokwazo, kodwa kwathatha ubhubhane wehlabathi ukukhumbuza ngamandla umhlaba ngeziphumo zawo.
Izigidi ezininzi kwiNdlala eNkulu
Kwabaninzi, iimpembelelo zoqoqosho kulo bhubhane ziyaqhubeka ukuba nzima kwaye zihlala zihleli. Siyazi ukuba singabonakala ngathi singabathunywa abangenakulindeleka kwesi sihloko — singabona bantu babenethamsanqa emhlabeni. Ubhubhane ukwenze kwacaca ngakumbi oko. Abantu abafana nathi baye bathwala ubhubhane ekwimo entle, ngelixa abo basesichengeni iye yabethwa kakhulu kwaye baya kuba ngabona bacothayo ukubuyela kwimeko yesiqhelo. Abantu abongezelelekileyo abangama-31 ezigidi kwihlabathi liphela batyhalelwe kwintlupheko ngenxa ye-COVID-19. Nangona amadoda engama-70% amathuba okusweleka ngenxa ye-COVID-19, abasetyhini bayaqhubeka nokuchaphazeleka ngokungalinganiyo ziimpembelelo zoqoqosho nezentlalo zalo bhubhane: Kulo nyaka, ingqesho yabasetyhini kwilizwe jikelele kulindeleke ukuba ihlale imisebenzi yezigidi ezili-13 ngaphantsi kwenqanaba lowama-2019- ngelixesha amadoda Ingqesho kulindeleke ukuba ibuyele kumanqanaba esifo sangaphambi kobhubhane.
Nangona izinto ezahlukeneyo zisongela ukujongela phantsi inkqubela esele siyenzile, uqoqosho oluthile luqala ukubuyela umva, luzisa ukuvulwa kwakhona kweshishini kunye nokudalwa kwemisebenzi. Kodwa ukubuyela kwimeko yesiqhelo akufani phakathi-kwaye nangaphakathi- kwamazwe. Ngonyaka ozayo, umzekelo, i-90% yoqoqosho oluphambili kulindeleke ukuba iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde ibuye, ngelixa isinye kwisithathu soqoqosho oluphakathi noluphakathi kulindeleke ukuba lwenze okufanayo. Imizamo yokunciphisa intlupheko iyahamba-kwaye oko kuthetha ukuba phantse abantu abazizigidi ezingama-700, uninzi lwabantu abakumazwe anengeniso ephantsi kunye naphakathi, kulindeleke ukuba bahlale behlwempuzeke kakhulu kwi-2030.
Ukukhula kwezikhewu kwezemfundo
Sibona ibali elifanayo xa kuziwa kwimfundo. Phambi kobhubhane, abantwana abasithoba kwabali-10 kumazwe anengeniso ephantsi babesele bengakwazi ukufunda nokuqonda isicatshulwa esisisiseko, xa kuthelekiswa nomntwana omnye kwabali-10 kumazwe anengeniso ephezulu.
Ubungqina bokuqala bucebisa ukuba ilahleko yokufunda iya kuba yeyona inkulu phakathi kwamaqela ahlelelekileyo. Ukwanda kokungafaniyo kwezemfundo kwafunyanwa kumazwe afumileyo, nawo. E-United States, umzekelo, ukulahleka kokufunda phakathi kwabafundi abaMnyama nabaseLatino bebanga lesithathu, ngokomndilili, kukuphinda kabini oko kwabaMhlophe nabaseAsia baseMelika. Kwaye ukulahleka kokufunda phakathi kwabafundi bebanga lesithathu kwizikolo ezihlwempuzeke kakhulu kwaba kathathu kwezo zoontanga babo kwizikolo ezihlwempuzeke kakhulu.
Baninzi abantwana abalahlekileyo izitofu zokugonya
Okwangoku, amazinga okugonywa kwabantwana esiqhelo awele kumanqanaba okugqibela ukubonwa ngo-2005. Phakathi kokuqalwa kwalo bhubhane naxa iinkonzo zempilo zaqala ukubuyela kwisiqingatha sesibini sowama-2020, abantwana abangaphezu kwezigidi ezingama-30 kwihlabathi jikelele baphoswa zizitofu zabo — zizigidi ezili-10 ezo. ngakumbi ngenxa yobhubhane. Kungenzeka ukuba uninzi lwaba bantwana alunakuze lubambe iidosi.
Kodwa apha, idatha isothusile: Kunyaka ophelileyo, besixele ukuba iZiko leMetri yezeMpilo kunye noVavanyo beliqikelela ukuba ukhuseleko luza kwehla ngepesenti ezili-14 kwihlabathi liphela ngo-2020, ebezakufikelela kwiminyaka engama-25 yenkqubela phambili. Kodwa ngokusekwe kwidatha yakutshanje, kujongeka njengokuhla kokona kugqunyiweyo kugonyo-nangona kwakubuhlungu-yayisiqingatha nje kuphela.
Njengokuba siqhubeka nokuhluza idatha, kuye kwacaca ukuba ayisiyiyo le nto: Kwiimpawu ezininzi zophuhliso, ilizwe linyukile kunyaka ophelileyo ukunqanda ezona meko zimbi.
Thatha i-malaria, umzekelo, ekudala isisinye sezifo ezingalinganiyo: i-90% yamatyala e-malaria afunyanwa e-Afrika. Kunyaka ophelileyo, uMbutho wezeMpilo weHlabathi uqikelele ukuphazamiseka okunzima kwiinzame zokuthintela isifo seengcongconi ezinokubuyisela inkqubela phambili kwiminyaka eli-10- kwaye zikhokelele ekufeni okungaphezulu kwama-200,000 kwisifo esinokuthintelwa. Olo qikelelo lukhuthaze amazwe amaninzi ukuba athathe amanyathelo okuqinisekisa ukuba iminatha yebhedi iyasasazwa kunye novavanyo kunye namachiza e-antimalarial ahlala ekhona. IBenin, apho isifo seengcongconi sesona sizathu siphambili sokufa, safumana indlela yokuziqambela embindini wale ndyikitya: Benze inkqubo entsha, ehanjiswa ngekhompyutha yokuhambisa iinambuzane, ukufumana iminatha ezizigidi ezingama-7.6 kumakhaya kwilizwe liphela Iintsuku ezingama-20.
ICotonou, Benin Ifoto ngoncedo lukaYanick Folly / AFP ngokusebenzisa imifanekiso kaGetty
Bafanelwe ngumbulelo wehlabathi.
Ewe kunjalo, ubungakanani obupheleleyo bempembelelo yesifo kwii-SDGs kuya kuthatha iminyaka ukuqonda ngokupheleleyo, njengoko ngakumbi nangakumbi idatha ifumaneka. Kwaye le datha ayinciphisi ukubandezeleka okwenyani okubangelwe ngubhubhane kubantu kuyo yonke indawo-kude kuyo. Kodwa inyani yokuba sinokwalatha kwiimpawu ezintle phakathi kwesibetho esingubhubhani okhoyo kwisizukulwana siyamangalisa. Isandla esinye sibotshelelwe ngasemva, uninzi lwabantu, imibutho kunye namazwe bahamba ngaphezulu nangaphaya ukuyila, ukulungelelanisa nokwakha iinkqubo ezomeleleyo, kwaye ngenxa yoko, bafanelwe ngumbulelo wehlabathi.
Abagadli baseAfrika balwa nokuzingela ngaphandle kwemvume phantsi kwengxaki ye-COVID ...
Abaqhubi bezokhenketho eTanzania bakhupha ikhaphethi ebomvu ye ...
IJamaica iKrisimesi ngoJulayi kaJulayi ebekwe ngoJulayi 22
Ziindwendwe zaNgaphandle eziGonyelweyo kuphela eziya kuvunyelwa ...
I-Seychelles yeba "Eyona ndawo iphambili kwiLizwe liShumi ...
ISt. Eustatius yamkela abakhenkethi abagonywe ngokupheleleyo
I-Waikiki isithsaba se-2021 Uninzi lweeNtsapho-eziHlobo zaseMelika ...
I-American ibhengeza iinqwelomoya ezintsha zaseColombia, Mexico neMelika
I-Etihad Airways iphehlelela iinqwelo moya eziya eVienna, eOstriya
I-ICAO yokukhanya okuluhlaza isindululo seQatar sokulawula ...
Amagosa aphezulu ezokhenketho atyelele iJamaica kwinqanaba eliphezulu ...
Ukubuyisela umthetho weBrand USA ovunyiweyo yi-US Senate
Ukudityaniswa kwesantya esiphezulu kuyo yonke indawo eCanada, UK ...
Inqwelo moya yasePhilippines yengozi yokufa kwabantu inyuke yaya kuma-52
Ujaji ubetha iCDC 'phantsi kwemiqathango ...
Inani labakhweli liyaqhubeka nokunyuka kwisikhululo senqwelomoya saseFrankfurt
INgxelo kaSihlalo weManyano ye-Afrika ...
Inqwelo moya yaseNorway iWiderøe iyenza njani imozulu enkulu ye-COVID-19 ...